विचार - Beemapost.com
नेपालमा शोधानान्तर घाटाको इतिहास, २०३९ सालको इतिहास दोहोरिन नदिन तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ
नेपालको अर्थतन्त्रबारे जसरी बजारमा हल्लाहरु भइरहेका छन् । श्रीलंका बन्छ भनेर राजनीतिकरण समेत भएको अवस्था छ । यी कुराहरु सत्य होइनन् । नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका बीचमा ज्यादै ठूलो भिन्नता छ । अहिले श्रीलंका बन्ने कुरा सत्य हुँदै होइन...
नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको चुरो कुरो के हो ? कहाँबाट देखियो समस्या ?
ब्यापार घाटासँगैसँगै रेमिट्यान्समा भएको कमि र अन्य वैदेशीक सहायतामा देखिएको कमीका कारण त्यसको एउटा नतिजा स्वरुप ब्यापार घाटा हुन गरेको छ । त्यसपछि हाम्रो अन्य समस्याहरु समेत उल्लेखनिय वृद्धि हुदै गयो र त्यसबाट हाम्रा अर्थतन्त्र कता जान्छ भनेर धेरैमा...
दलीय स्वार्थ, राजनीति स्वार्थ त्यागौं, अर्थतन्त्रलाई भासिनबाट जोगाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ
वित्तिय सूचांकहरुमा देशको अवस्था चित्त बुझाउन सक्ने छैन । तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण गर्दा देशको आर्थिक अवस्था डरलाग्दो अवस्थामा जादै छ कि भन्ने बहस सुरु हुन थालेको अवस्था छ । संकटउन्मुख अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्राको संचिती हो...
घर बनाउँदा कस्तो–कस्तो पाइप चाहिन्छ ?
सामान्यतया सर्वसाधारण नेपालीले जीवनमा कम्तीमा पनि एकपटक घर अवश्य बनाउँछन् । आफ्नो जीवनभरको बचत रकम लगानी गरेर बनाइने घर सामान्य गल्तीका कारण कमजोर भयो भने एकातिर धनको नाश भयो, अर्कोतिर असुरक्षित पनि हुने भयो । त्यसैले घर बनाउँदा सकेसम्म...
होली पर्वलाई जीवन बीमासँग जोडौं, खुशी र उमंगलाई जोखिम रहित बनाऔं
होली अर्थात रंगहरुको पर्व । बहुरंगको अर्थ हुन्छ खुशी यो खुशी, उत्साहको समय समेत हो । आज नेपाल र भोलि नेपालमा मात्रै नभएर छिमेकी मुलुक भारतमा समेत होली पर्व भव्य र सभ्य रुपमा मनाइदैछ । रंगहरुको पर्व अनि त्यसमाथि...
मोटर बीमा दावी भुक्तानीमा ‘नक फर नक’ सिद्धान्त र नेपालमा यसको प्रयोग
मोटर बीमाको दावी भुक्तानी हरेक बीमा कम्पनीमाहरु सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने गर्दछ । नेपालमा दैनिक रुपमा हुने गरेको सवारी दुर्घटना र तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको कारण मोटर बीमा दावी भुक्तानी हरेक कम्पनीमा दिनहु जसो दावी भुक्तानी विभागले सामना...
सन्दर्भ : ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस- बराबरी भविष्यको लडाइँमा महिला
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस २०२१ को सन्दर्भमा प्रमुख नारा दिइएको थियो– ‘नेतृत्वमा महिलाहरू : कोभिड १९ को विश्वमा बराबरी भविष्यको प्राप्ति ।’ यसपालि अर्थात् सन् २०२२ को दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा Gender equality today forasustainable tomorrow ‘दिगो भविष्यका...